‘कागले कान लग्यो’ भन्दा भूषण दाहालसहितका मान्छे कागका पछिपछि दौडेका? – MySansar
आज एउटा रमाइलो दृश्य देखियो सामाजिक सञ्जालमा- कान्तिपुर टेलिभिजनमा वर्षौँ नेतृत्व तहमा रहेका भूषण दाहाल जस्ता सञ्चारकर्मी एउटा फेक स्क्रिनसटलाई विश्वास गरेर कान्तिपुरका प्रधान सम्पादकलाई मेन्सँदै गरेको। कत्रा ठूलाठूला नेताहरुको अन्तर्वार्ता लिइसकेका व्यक्ति त त्यसरी ‘कागले कान लग्यो’ भन्दा कान नछामी कागका पछि पछि दौड्दै गरेको देखियो भने अरु सामान्य मान्छेको के होला हालत ?
भएछ के भने सामाजिक सञ्जालमा आज एउटा समाचारसहितको फेसबुक स्क्रिनसट भाइरल भयो, जसमा ‘चोरिएको ६२ वर्षपछि पाटनको उमामहेश्वर मूर्ति अमेरिकाबाट घर फर्कँदै’ शीर्षकको कान्तिपुरको समाचार देखिन्छ। तर सो समाचारसँगै इकान्तिपुरको फेसबुक पेज जस्तो देखिने स्क्रिनसटमा लेखेको देखिन्छ- ‘पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र लगायत तात्कालिन राजपरिवारका केहि सदस्यका मिलेमतोमा दशकौ पहिले बेचबिखन गरिएको मुर्ति लोकन्त्रमा फिर्ता ल्याईदै’।
यसो हेर्‍यो, कान्तिपुर लेखिएको छ। भेरिफाइडको निलो टिक पनि छ। उहाँहरुलाई लाग्यो होला- पक्कै कान्तिपुरले नै यस्तो लेखेछ। हैट, यस्तो पनि लेख्ने हो? चित्त दुख्यो। अनि सुरु भयो सामाजिक सञ्जालमा कान्तिपुरलाई गाली गर्ने क्रम।
कतिले हिसाब पनि निकाले- ज्ञानेन्द्रको उमेर अहिले ७५ वर्ष हो। ६२ वर्षअघि चोरिएको मूर्ति भनेको रहेछ। अब ७५ बाट ६२ घटाउँदा १३ आउँछ, कसरी १३ वर्षको बालकले मूर्ति चोर्न सक्छ?
अँ त नि। फेरि रिस उठ्यो- यस्तो झुटो लेख्ने कान्तिपुरले ?
त्यसरी गाली गर्नेहरुलाई कान्तिपुरले साँच्चिकै के लेखेको छ त्यो समाचारमा वा त्यो स्क्रिनसट सही हो कि गलत हो भनेर खोज्ने, सोच्ने फूर्सद र समयसम्म भएन। आ…, कसले दुःख गरिरहोस्।
भूषण दाहालले सेप्टेम्बर १६ बिहीबार कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मालाई मेन्सन गर्दै ट्विट गरेका छन्– ‘यो त अलि अति नै भयो कि? अपुष्टताको पराकाष्ठ…’
उनले कोट ट्विट गरेको ट्विट भने हामीले स्क्रिनसट लिँदासम्म डिलिट भइसकेको थियो। तर त्यसको स्क्रिनसट यस्तो थियो-
दिनेश पराजुली नामका ट्विटर प्रयोगकर्ताले सेयर गरेको यो स्क्रिनसटमा ३८ रिट्विट, १७ कमेन्ट र ९३ लाइक देखिन्छ।
सीताराम आचार्यले फेसबुकमा राखेको यही स्क्रिनसटसहितको स्टायटसमा बिहीबार साँझसम्म ७९ कमेन्ट र २४ सेयर देखिन्छ।
नेवार राजन नामका अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ताले यही स्क्रिनसट राखेर कान्तिपुरप्रति नकारात्मक टिप्पणी लेखेका छन्। यसमा १६ कमेन्ट र १४ सेयर देखिन्छ।
फेसबुकमा अरु पनि थुप्रैले यो स्क्रिनसटसहितका टिप्पणी सेयर गरेका छन्।
हामीले फेसबुकमा यो समाचार खोज्दा कान्तिपुरको आधिकारिक भेरिफाइड फेसबुक पेजमा १४ सेप्टेम्बर २०२१ मा मध्याह्न १२ बजेर २१ मिनेटमा अपडेट भएको भेट्टायौँ।
यो फेसबुक पोस्ट इडिट गरिएको छैन र यसमा भाइरल भएको स्क्रिनसटमा जस्तो लेखेको देखिन्न।
कान्तिपुरका सम्पादक उमेश चौहानले ‘फोटोसप गरिएका नक्कली स्क्रिनसट सेयर गरेर भ्रमित नबनौँ, नबनाऔँ’ लेख्दै ट्विट गरेका छन्।
इकान्तिपुरका सम्पादक दुर्गा खनालले पनि फेक ट्विटको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दै ट्विट गरेका छन्।
इकान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार पूरै पढ्दा त्यसमा कतै पनि भाइरल भएको स्क्रिनसटमा लेखिए जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वा उनको परिवारलाई जोडेर केही लेखेको भेटिएन। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
त्यसबाहेक भाइरल भएको स्क्रिनसटमा प्रयोग गरिएको भाषामा पनि प्रशस्त गल्ती छन्, कान्तिपुर जस्तो मिडियाको सोसल मिडियामा यति धेरै गल्ती हुनु असामान्य देखिन्छ। यसले पनि स्क्रिनसट नक्कली भएको भन्न मिल्ने आधार छ।
भाइरल भएको स्क्रिनसटमा एक वाक्यमा देखिएका ६ गल्ती।
यसबाहेक सम्बन्धित पेजबाटै पोस्ट भएको स्ट्याटस जस्तो देखिने गरी फेक स्क्रिनसट बनाउन फोटोसप नै गरिरहन जरुरी छैन। सामान्य एचटिएमएल जानेको व्यक्तिले वेब ब्राउजरबाटै सजिलै त्यस्तो नक्कली स्क्रिनसट बनाउन सक्छन्।
दावी : कान्तिपुरले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पूर्व राजपरिवारलाई मुछेर मूर्तिचोरी सम्बन्धी समाचारको लिङ्कसहित स्टायटस पोस्ट गरेको छ।
तथ्य जाँच : मिथ्या सूचना। कान्तिपुरको फेसबुक वा ट्विटरमा यस्तो स्टायटस पोस्ट भएको कुनै प्रमाण छैन। लिङ्कमा रहेको समाचारमा पनि त्यसबारे केही उल्लेख छैन। भाइरल भएको स्क्रिनसटमा प्रयोग गरिएको अशुद्ध भाषा र रातो लगाएको बाहेक उही देखिने एउटै स्क्रिनसट मात्र फैलिएको देखिन्छ। यस्तो स्क्रिनसट सहजै बनाउन सकिने हुँदा यो स्क्रिनसट मिथ्या भन्न सकिन्छ।
हामीले के गर्न सक्छौँ ? केही सुझाव
सामाजिक सञ्जालमा देखिने सबै कुरा सही हुँदैनन्। आँखाले देखेका र कानले सुनेका कुरा पनि गलत हुनसक्छन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुरा सेयर भएको देख्ने बित्तिकै त्यसमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न हतार नगर्नुस्। पहिला त्यो सही हो त, गलत त होइन भनेर आफैले खोज्ने प्रयास गर्नुस्। यति गर्नुभयो भने पछि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन।
समय छ भने सामग्री सही छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्नुहोस्।
शङ्कास्पद सामग्रीमा तथ्यजाँचका लागि हामीलाई यहाँ सुझाव दिनुहोस्।
2 thoughts on “‘कागले कान लग्यो’ भन्दा भूषण दाहालसहितका मान्छे कागका पछिपछि दौडेका?”
यदि भूषण दाहाल दिपेन्द्र / निरञ्जन वा राजपरिवारको को नजिकको मानिस भएको भए कान्तिपुर टिभीमा पत्रकार त के, toilet cleaner भएर पनि छिर्न पाउनेथिएन् । कान्तिपुर टिभी वा Kantipur Media Group भित्र काम पाउन सबै भन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको Active anti-monarchy of Nepal हुन जरुरी छ । अरु बाँकि भनेको सबै nepotism ले नै काम गर्ने हो । हैन भने दाहाल एक opportunist हुन् जस्तो लाग्छ ।
यस्तो disinformationले देशमा कलह निम्त्याउन सक्ने हुनाले share गरिएको link check गर्ने बानी बसालौं भनेर campaign नै गर्नुपर्छ। अनि भुषणजी चाहिं यो राजा साजाको मामिलामा बढि Emotional हुनु भएन (भलै उनी Dipendra/Nirajanका निकटका मित्र हुन र यो disinformation ज्ञानेन्द शाहको मानहानि गर्न बनाईएको हो)। Media personnel भएकाले उनले objective भएर समाचार हो कि असमाचार पत्ता लगाएर हामी नेपाली सबैलाई सचेत गर्नुपर्छ।